वैकल्पिक राजनीतिः आज बेचल्तीको बाटो, भोलि मूल बाटो
On: २०७६ श्रावण १३ गते, सोमबार, ११:५० बजे प्रकाशित
नेपालमा राजनैतिक परिवर्तनको शृङ्खला लामो नै भएपनि, प्रत्येक परिवर्तनले आम मानिसको जन जीविकामा महसुस गर्ने सक्ने परिवर्तन ल्याउन नसक्दा आशासँगै निराशा पैदा भएको र पराजित शक्तिहरू पुनर्सङ्गठित हुदै प्रतिक्रान्ति हुने गरेको इतिहास हाम्रा माझ छ। नेपालमा आजको दुई तिहाइको सरकारले नेपालमा संस्थागत हुदै गएको भ्रष्टाचार, बढ्दो बेरोजगारी, कृषि अर्थतन्त्रको क्षयिकरण तथा अति नै महँगो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अवस्थालाई आफ्ना प्रचारात्मक कार्यक्रमहरूको तामझामले ढाकछोप मात्रै गरेकोले जनतामा निराशा देखिनु स्वभाविक हो। निश्चय पनि क्रान्ति अनि प्रतिक्रान्तिको घनचक्करमा नेपाल फँस्नु हँुदैन। सरकारको असफलता भनौँ या अकर्मण्यताले यस्ता शक्ति फेरि चलखेल गर्दै गरेको छनक देखिन थालेको छ। राजनैतिक पार्टीले आफ्नो राजनैतिक विसङ्गति तथा जडतालाई चिर्न नसक्नु, पद्दति, पारदर्शिता तथा सुशासनलाई सुनिश्चित गर्न नसक्नु, अझ भनौँ नेपालको माटो सुहाउँदो राजनैतिक व्यवस्था र सुसंस्कृत परिपाटी विकास गर्न नसक्दा नेपालले सोचे अनुरूप छलाङ मार्नेमा आशङ्का छ।
नेपालले खोजेजस्तो र जनताले सोचेजस्तो राजनैतिक पार्टी, ब्यवस्था र सुसंस्कृत राजनैतिक परिपाटीको बहस बहुदलको स्थापनासँगै शुरु भए पनि यसले मूर्त रुप लिन सकेको थिएन । तत्कालीन विवेकशील नेपाली दल तथा साझा पार्टीले वैकल्पिक राजनीतिलाई नेपालमा अगाडि बढाउन सुरुवाती भूमिका खेले। यद्यपि प्राज्ञिक स्तरमा खास बहस हुन सकेको छैन।
के वैकल्पिक राजनीति नै अबको निकास हो त ?
यदि हो भने किन हो र किन होइन आज बहस हुनु आवश्यक छ।
गत स्थानीय चुनावमा काठमाडौँ र ललितपुर महानगरमा विवेकशील नेपाली दल तथा त्यस समय भर्खरै मात्र गठन भएको साझा पार्टीले स्थापित राजनैतिक दललाई राम्रै टक्कर दिन सफल भए। यी दुई पार्टी, विवेकशील साझा पार्टीको रुपमा जसरी एकीकरण भयो, यसले राजनीतिक माहोलमा ठूलै तरङ्ग सृजना गर्न सफल भयो। पछिल्लो संसदीय चुनावमा अपेक्षाकृत रुपमा राम्रो मत प्राप्त गर्न पनि सफल भयो भने प्रदेश ३ मा तेस्रो ठूलो र प्रादेशिक पार्टीको रुपमा स्थापित भयो। धेरै हदसम्म विवेकशील साझा पार्टीलाई आगामी विकल्पको रुपमा जनताले हेर्न थालिसकेका थिए। यद्यपि विवेकशील साझा पार्टीको नाटकीय फुटले वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलनमा धेरै प्रश्नहरु उब्जिएका छन्।वैकल्पिक राजनीति कता जाँदै छ? नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावना कत्तिको छ ? यसको प्रमुख बाधक के कस्ता छन्, यावत प्रश्न छन्।
वास्तवमा वैकल्पिक राजनीतिक अवधारणा आफैमा नवीन सोंच र प्रयोग हो। हालको राजनैतिक बिसंगति, दर्शन, सिद्धान्त अनि व्यवहार र यथार्थमा देखिएको खाडललाई चिर्ने प्रयत्न हो। नेपाली जनताको सुसंस्कृत राजनीति र समानतापूर्ण सम्बृद्धिको सपनालाई साकार पार्ने खोजको नवीन प्रयोग पनि हो। बिद्यमान ब्यवस्थाभित्रै रहेर देश र जनताको अवस्थामा सुधार गर्ने सुरक्षित बिकल्प हो। यसले न त हिंसाको समर्थन गर्छ न त स्वार्थको बझान् नै। समदृष्टि र समभावका बिच सम्भावनाहरुको खोजी नै बैकल्पिक राजनीति हो।वैकल्पिक राजनीतिका अभियन्ता, तथा भारतका आम आदमी पार्टीका पूर्व नेता योगेन्द्र यादव भन्छन्, “वैकल्पिक राजनीति मूल्य मान्यता र राजनीति संगसंगै हिड्ने नयाँ र सुनौलो बाटोको खोजी हो।
आज वैकल्पिक राजनीतिको विश्वका अन्य राष्ट्रहरुमा केहि जनलहर देखिन थालिसकेको छ। अमेरिकामा प्रोग्रेसिभ पार्टीले गत राष्ट्रपति चुनावमा ल्याएको भोट,डेनमार्कमा अल्टरनेटिभ पार्टीको गठन,फ्रान्समा इमानुयल म्याक्रोनको बिजय,इटलीको फाईव स्टार अभियान,त्यस्तै दक्षिण एशियाको पाकिस्तानमा इमरान खानको उदय र भारतमा आम आदमी पार्टीले दिल्लीमा ल्याएको जनलहर र बिकासले पनि एकाइसौ शताब्दी सुहाउँदो नयाँ राजनीतिक परिपाटीको आवश्यकता विश्वब्यापी खोज हो भन्ने पुष्टि गर्छ। युक्रेनमा तीन महिनाअघि ४१ बर्षीय हाँस्यकलाकार भोलोदमिर जेलेन्स्की भारी मत पाएर राष्ट्रपति चुनिए। केहि अघिसम्म टेलिभिजन कार्यक्रममा शिक्षकबाट अचानक राष्ट्रपति बनेको पात्रको भूमिका निर्वाह गरिरहेका उनी युक्रेनका साँच्चै राष्ट्रपति बनेका छन् जसले आफ्नो चुनावी अभियानमा युक्रेनको कुलीनतन्त्र विरूद्ध नारा दिएका थिए।
तर नेपालमा भने अझै पनि यो बेचल्तीको बाटो झै देखिएको छ।तर गहिरो रुपमा हेर्ने हो भने यो बाटो निर्विकल्प छ।
राजनीति घृणित खेल:
नेपालमा राजनीति फोहोरी खेल हो, नेता भनेका चोर र फटाहा हुन् भन्ने मनोरोगबाट नेपाली समाज उठ्न सकेको छैन। मनोरोग भन्दा पनि नेताहरुको देश र जनताप्रतिको उदासीनताले राजनीतिलाई घृणाको मानक बनाएको छ। आजका वैकल्पिक शक्ति यसवाट पृथक देखिन संघर्षरत देखिन्छन् । केही आशा जगाएका छन्, तर जनताको विश्वास जितिसकेको अवस्था छैन।
यस अवस्थामा पुरानै सोंच र संस्कार भएका शक्ति, प्रतिक्रान्तिको तानाबाना बुनेर शक्तिमा आउने चलखेल गर्दै गरेको आभाश हुदैछ। राजनैतिक परिवर्तनका बेला बिदेश पलायन हुने तर हामीले ल्याईदिएको गणतन्त्रमा बोल्ने तिमीहरु डलरवादी भनेर आरोप लगाउँदैछन्। हिजो राजनैतिक परिवर्तनका लागि लडेको ब्याज हामीले देशलाई सक्दो लुटेर खान पाउनुपर्छ, तिमीहरु बोल्न पाउँदैनौ भन्ने आशयका प्रतिकृयाहरु सुन्नमा आईरहेकै छन्।
जनतामा देखिएको निराशा र न्यून चेतना स्तरको फाईदा लिदैं गर्ने उक्साहटबाट जनतालाई सचेत गराउनु हाम्रो दायित्व पनि हो। आज हामीले आम जन समुदायलाई वैकल्पिक राजनीति र विकल्पको राजनीतिमा रहेको फरक बुझाउनु सक्नुपर्छ। नत्र राज्यसत्ताको असहिष्णुता र प्रतिक्रान्तिको आक्रमण झेल्न कठिन हुनेछ।
वैकल्पिक राजनीति भनेको वैकल्पिक पार्टी मात्र होइन, अरुले आरोप लगाएजस्तो यो प्रतिगामी सोंच पनि होइन। नेपालमा हाल लोकतन्त्रले राम्रो गर्न सकेन, यसको विकल्प खोज्नु पर्छ। हिजोको राजतन्त्र नै ठिक थियो, हिजो एकात्मक राज्य नै उत्कृष्ट थियो भन्ने बहस गर्छन्। यस्ता बहस आफैमा गलत होइनन्, तर अग्रगामी निकास भने कदापि होइनन्। विकल्पको राजनीतिले लोकतन्त्रको विकल्प खोज्छ,यो घातक छ। विकल्पको राजनीतिले काँग्रेसको विकल्प नेपाल कम्युनिष्टको पार्टीले देला,अथवा राप्रपालाई देख्न सक्ला,अझ पुरानै शासन पद्दतिलाई प्रोत्साहन गर्ला,तर यसले राजनीति गर्ने आधारभूत शैलीमा तात्विक भिन्नता दिने छैन। बन्दको संस्कृति,अभद्र बिरोध शैली,संस्थागत भ्रष्टाचार तथा आम नागरिकको जीवनमा फरकपन देखिने छैन।
वैकल्पिक राजनीतिका मुद्दाहरुः
राजनीतिलाई फोहोरी खेल होइन भनेर यसको परिभाषा बदल्न अघि सरेका राजनैतिक शक्तिले अव जनताका मुद्दाहरुलाई मिहिन ढंगले केलाउदै राजनैतिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने शक्तिका रुपमा अगाडि आउनु पर्दछ। संभव भएका सबै मुद्दाहरुमा कार्यगत एकता बनाई संयुक्त मोर्चाद्वारा बिद्यमान बिसंगतिको बिरोध गर्न सक्नु पर्छ।
प्रत्येक विषयमा प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी दिनुभन्दा पनि सैद्धांतिक अवधारणालाई केलाउँदै बस्तुगत यथार्थमा समस्याका समाधान खोज्न पहल गर्नु पर्छ। हाल वैकल्पिक राजनीतिको बाटो बेचल्तीको देखिए पनि भविष्यको मूल बाटो बन्ने प्रचुर सम्भावना छ। यसका लागि जनताका आधारभूत मुद्दाहरुमा जनताको व्यापक सहभागितामा जनताले महसुस हुने गरी परिवर्तन ल्याउन अहम भूमिका खेल्नु पर्नेछ। रचनात्मक बिरोध, प्राज्ञिक बहश,नीतिगत सुधार जस्ता कार्यका लागि बाह्रमासे कार्यकर्ता अनि पेशागत भात्रृ सङ्गठनको सहयोग विना, आम नागरिकको साथमा गर्न सक्नु पर्छ। समाजशास्त्री डा. चैतन्य मिश्रले भनेका जस्ता “सार्वजनिक बुद्धिजीवी” हरुले उठाएको मुद्धाहरुलाई वैकल्पिक शक्तिले राजनैतिक समाधान खोज्न अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्दछ। जनताका सरोकारका प्रत्येक बिषयमा राजनीतिक प्रश्न र बहस गर्दै अगाडि बढ्न सके वैकल्पिक राजनीतिले लोकतन्त्रको रक्तसञ्चारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ।
नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको प्रयोग र प्रयास तत्काल सफल हुन सक्ने देखिन्छ पनि अथवा अझ केहि समय लिन सक्छ, तर वैकल्पिक राजनैतिक आन्दोलनलाई अव कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन। पूरै बिश्वमा यो सोंचको गहिराइमा बहस हुदैछ र संसारका धेरै देशमा यो नवीन आन्दोलन अघि बढिसकेको छ । नेपालमा पनि हरेक तहमा बहस गर्दै वैकल्पिक दर्शन–विचार–नीति तथा कार्यक्रम र व्यवहारमा एकरुपता ल्याउदै अगाडि बढ्न सके वैकल्पिक शक्ति एकै ठाउँमा आउने मिलन बिन्दु भेटिन सक्छ र अझ सशक्त ढंगले अगाडि बढ्न मद्दत मिल्नेछ।
२०७६ श्रावण १३ गते, सोमबार, ११:५० बजे प्रकाशित